Buuloburde: faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Buuloburde: faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii
Buuloburde: faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii
Wararka laga helayo Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo muddo kooban soconayay uu ku dhexmay tuulada Shooli oo hoostagta degmada Buuloburde ee gobolkaasi dad xoolo dhaqato ah iyo dagaalyahan ka tirsan xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Dad goobjoog u ahaa dhacdadaasi waxay sheegeen in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaadheen dagaalka oo qarxay kaddib markii ay Shabaab aad u hubeysan soo weerareen tuuladaasi.
Afhayeen u hadlay maammulka Buuloburde ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in 5 ka mid ahayd dadka dhintay ay ahaayeen Al-shabaab, qof kaloo shacab ahaana ay haleeshay rasaastii la isku ridayay intii uu socday isku dhacaasi.
Dhinaca kale, ciidamadda nabad ilaalinta Midowga Afrika iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa gaadhay halkaasi.
Ilaa iyo imminka masuuliyiinta sare ee ururka al-shabaab si rasmi ah ugama hadlin khasaaraha dagaalkaasi.
Previous articleBaydhabo oo ergooyin hor leh ku biirayaan shirka
Next articleMaman: lama keenayo askar aan la soo baarin